PTFE Film Factory - China PTFE Ihe nkiri Manufacturers, Suppliers
Polymer PTFE Film mpempe akwụkwọ White 0.03mm
Nkọwapụta: * Ihe: PTFE * Ọkpụrụkpụ: 0.03mm * Ogologo: 8600mm / mpịakọta * Obosara: 1000mm * Agba: White * Ahịa: 21.6 ~ 24.6 USD kwa KG Njirimara: - Wide arụ ọrụ ọnọdụ okpomọkụ: -200-260 ℃. Nguzogide corrosion, maka ọtụtụ kemịkal na ihe mgbaze, na-egosi inert, na-eguzogide ọgwụ na acid na alkali, mmiri na ihe dị iche iche na-edozi ihe. - Akwa ...
PTFE Myọcha Nkiri
PTFE nyo fim na-uru nke fibril-kụrụ akpụ atụmatụ nke PTFE na site push pịa, ndọtị pịa, de-nkịtị, elu-okpomọkụ ndinyanade mbịne na udi gwara si na ngwaahịa na-eji ire ụtọ elu, chemical-eguzogide, breathable windproof), ire ọkụ retardant, elu -emepụta okpomọkụ na-eguzogide, ike acid & alkali iguzogide na-abụghị toxicity. Aperture diameters, ọkpụrụkpụ na porosities nwere ike gbanwee na ndinyanade mbịne dị ka dị iche iche chọrọ. Enwere ike itinye ngwaahịa na ...
Jupụta PTFE Nkiri
Skived, jupụtara PTFE film ntekwasa otu akụkụ, silicone nrapado; Low ọnụọgụ nke esemokwu; Pụtara ìhè abrasion eguzogide, nke equates 500-n'ogige atụrụ na-abawanye na wear-eguzogide n'elu ọkọlọtọ PTFE; Chemically inert; Ezigbo elu okpomọkụ na-eguzogide; Atụmatụ: Teepu a nwere ebe a na-ete onwe ya mmanụ ma na-akwado ya. Ihe owuwu teepu ahụ kwụsiri ike, na-anaghị egbu egbu ma na-eguzogide ihu igwe.
5-mil PTFE Nkịtị Mezie
5 mil akwado ọkpụrụkpụ mepụtara site PTFE impregnated iko ákwà na-ntekwasa na a "elu okpomọkụ" silicone nrapado. The PTFE na-enye ezigbo mgbochi osisi ebe iko iko na-enye ike na akụkụ nkwụsi ike ingkwado: PFTE Glass Cloth nrapado :dị: Silicone Total ọkpụrụkpụ (mil): - Akwado ọkpụrụkpụ (mil): 5.0 mil nrapado ọkpụrụkpụ (mil): 2.0 mil Nrapado na ígwè (oz / in): 45 ...
3m PTFE Ihe nkiri
PTFE plastic plastic na-abata na mpịakọta na .005 - .020 ọkpụrụkpụ. Ọ bụrụ na ịtụ ihe karịrị 1 pc, a ga-ebipụ ya na mpịakọta. Na oke ibu karịa .020, anyị na-enweta 48 x 48 ma belata na mgbakwunye ị hụrụ edepụtara. Site na nha ndị a, Ọ B sizeLA oke nwere ike ịkpụ ma ọ bụ mezie ya! PTFE nwere ebe mgbaze kachasị elu ma nwee ike ịga n'ihu na 500F (260 C). FEP bụ ihe na-agbaze agbaze nwere ike ịga n'ihu na 400F (204 C). PTFE ngwaahịa na-eji dị ka gasket na mbukota materia ...
PTFE mpempe akwụkwọ Film ọkpụrụkpụ 0.2mm
PTFE / Polymer Film mpempe akwụkwọ na-arụpụtara site na-akwụsịtụ PTFE resin mgbe ịkpụzi. O nwere ikike kachasị mma iji gbochie mmebi kemịkal, na ịka nká, enwere ike iji ya n'okpuru -180C ~ + 260C na-enweghị ibu, yana ọ nwere ọnụ ọgụgụ akụkọ ifo kachasị dị ala n'ihe ama ama. Nkọwa: Aha aha: PTFE Sheet Main Color: Transparent Ihe: PTFE Oke: 0.2mm ma ọ bụ omenala Ngwa: 1.Widely used in light industry, war industry, spaceflight, oilfield, wdg 2.PTFE ihe nwere ac ...